कस्ताे हाेला कोरियाली कम्पनीले नेपालमै बनाउने कार ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कस्ताे हाेला कोरियाली कम्पनीले नेपालमै बनाउने कार ?
प्रकाशित मिति ३ चैत्र २०७५, आईतवार ०९:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमै ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गर्न उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।
सन् २००१ मा स्थापना मोट्रेक्स कोरियामा स्थापित कम्पनी मानिन्छ । यो कम्पनीलाई बोर्ड बैठकले १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरी नेपालमा एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न अनुमति दिएको हो । उक्त विदेशी लगानी रकम प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार बनेयताको सबैभन्दा ठूलो हो ।
‘अबको १८ महिनामा उद्योग स्थापना गरिसक्ने उसको योजना छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योग स्थापनाको सुरुको वर्षमा २ हजार र पछि २० हजारवटा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ ।’ कार, ठूला सवारी साधन उत्पादन गर्ने उसको प्रस्ताव छ । ‘विद्युतीय सवारीलाई नै प्राथमिकता दिने उसको प्रतिबद्धता छ,’ ती अधिकारीले भने ।
एसेम्बल प्लान्ट रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने तयारी छ । उसले एक सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराइदिन बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । ‘कोरियाबाट आएका कम्पनीका लगानीकर्ताले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकनसमेत गरिसकेका छन्,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘मोतिपुरको ८ सय बिघा जग्गामध्ये एक सय बिघा सायद उसले पाउनेछ ।’
मोट्रेक्सले नेपाली साझेदारीकोही पनि लिएको छैन । ‘तीन महिनाअघि उसले प्रस्ताव पेस गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘छलफल र वार्ताका लागि कम्पनीका अधिकारीहरू सोझै हामीकहाँ आएका हुन् । हामीले कम्पनीको बृहत् विवरण हेरेर, बुझेर लगानी स्वीकृति दिएका हौं ।’
यसअघि नेपालमा गोल्छा समूहको हुलास मोटर्सले नेपालमै ४ पांग्रे सवारी उत्पादन गरेको थियो । केही सवारी साधन उत्पादन गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेन । अहिले हुलासले आफ्ना उत्पादन बन्द गरेको छ ।
विदेशबाट दुई बैंकले मात्रै ल्याए ऋण
काठमाडौं । लगानीयोग्य रकम अभावको रमस्या समाधान गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवत्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन…
कम्युनिस्ट सरकारको दुई कुरा कांग्रेसद्वारा खारेज
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रमुख प्रतिपक्षलाई दोष दिएर एकलौटी रुपमा संसद कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंक पुनर्निर्माण : पप्पु जोडिँदा योजना अलपत्र
काठमाडौं । ठेकेदार टुंगो नलाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन पुननिर्माण योजना रोकिएको छ ।
प्राप्त बोलपत्रमध्ये सबभन्दा…
नक्कली नागरिकताधारीकाे केरूङमा याैन धन्दा
रसुवा । ललाइफकाई एक युवतीलाई नक्कली नागरिकतासमेत खडा गरी केरुङ पु¥याएको आरोपमा दुई युवालाई रसुवा प्रहरीले आज पक्राउ गरी…
कान्तिपुरका पत्रकारको रूवाबासी: मिडिया हाउसविरुद्ध महासंघ उत्रिने
काठमाण्डौ । न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतको सुविधा नपाएको भन्दै मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले नेपाल पत्रकार महासंघमा धमाधम निवेदन…